Tokyoမြို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yuriko Koike စံက ရှေ့နှစ် Tokyoအိုလံပစ်ကျင်းပသင့်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ !!!! - JAPO Japanese News
Tokyoမြို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yuriko Koike စံက ရှေ့နှစ် Tokyoအိုလံပစ်ကျင်းပသင့်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ !!!!
ဂါ 14 Jul 2020, 14:21 ညနေ
တိုကျိုမြို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yuriko Koike စံက ၁၃ ရက်နေ့၊ Reuters သတင်းဌာနမှာ လာမယ့်နှစ်စီစဥ်ထားတဲ့ Olympic နဲ့ Paralympic ကစားပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး
“ သေချာပေါက် ကျင်းပသင့်တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက ဒီအခက်အခဲကိုကျော်လွှားပြီး၊ လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ သံယောဇဥ်က ပိုပြီးခိုင်မာလာဖို့ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပသင့်တယ်” လို့‌ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းတိုင်းပြည်တွင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေအရ ထက်ဝက်ကျော်လောက်ကတော့ ကိုရိုနာကူးစက်မှုက ပျံ့နှံ့စဲဖြစ်နေတာကြောင့် ရှေ့နှစ်အိုလံပစ်ကျင်းပဖို့ရပ်ဆိုင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ထပ်ပြီးရွှေ့ဆိုင်းသင့်တယ်လို့ ပြောလာကြပါတယ်။
ဘယ်အချိန်ထိ ကျင်းပသင့်မသင့်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တာနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ ” ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း (ကိုရိုနာကူးစက်မှုပျံ့နှံ့ခြင်း) ကြပ်တည်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း ကူးစက်မှုအခြေအနေပြောင်းလဲလာမှုတို့ကို သေချာအောင်လုပ်ပြီး၊ ကာကွယ်မှုစီမံဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုလည်း ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်” လို့လည်းပြောကာ၊
ဆက်စပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းရင်း အဆက်မပြတ် သတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်သွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တိုကျိုမြို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်သူတွေဟာ ယမန်နေ့က လူပေါင်း ၂၀၀ အထက်ကျော်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်သလို အစိုးရဘက်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့တဲ့ Go To Campaign စီးပွားရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ၇ လပိုင်း ၂၂ ရက်ကနေ အစပြုမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Koike ဟာ ” တိုကျို၊ မြို့ဧရိယာအတွင်း စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကို စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဟာ၊ Campaign ရဲ့အောင်မြင်မှုသို့ဦးတည်သွားမယ်မဟုတ်လား ” လို့ပြောပြီး၊ ” မြို့အနေနဲ့ Positive လူနာတွေကိုအတည်ပြုကာ မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပြုလုပ်သွားခြင်းထက်၊ ရောဂါကူးစက်ခံရသူပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ လူမှုစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများဟန်ချက်ညီမှုအရေးကို အသားပေးပြီးလုပ်ဆောင်သွားမယ်” လို့လည်းသူမရဲ့ခံယူချက်ကို ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
၇ လပိုင်းအစမှာပဲ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာ Yuriko Koike စံဟာ မဲအများဆုံးနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံရွေးချယ်ခံရသော်လည်း ဆက်လက်ပြီးဂျပန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့ အများပြည်သူဆီက မျှော်လင့်ထားခြင်းခံသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအမြင်ပေါ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ “ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုရရှိတဲ့အတွက်ပျော်ပါတယ်” သို့သော် ” ကိုရိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ကာ မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ အသက်နဲ့ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်မစဥ်းစားနေတဲ့ အကြီးမားဆုံးသော Mission ပဲ” လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် တိုကျိုရဲ့သတင်းအချက်အလက်အဆောက်အအုံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြီး၊ နိုင်ငံရပ်ခြားကနေ အရည်အချင်းရှိတဲ့လူသားအရင်းအမြစ်တွေကို ခေါ်ယူသွားချင်တယ်လို့လည်း သူမရဲ့သဘောထားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စကားမစပ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ်ရဲ့ Logo ကတော့ ……..
တိုကျိူမြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yuriko Koike စံဟာ သူမရဲ့သဘောထားကိုအတိအလင်းပြောပြသွားတဲ့အတိုင်း စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုထင်မြင်မိပါသလဲ?….
(၁၂) ရက်နေ့ ကူးစက်လူနာအသစ် တိုကျို ၃၉၃ ဦး၊ ဟိုကိုင်းဒိုး ၂၂၀ ဦးရှိ
(၃၁) ရက်နေ့ တိုကျိုကူးစက်မှု ၁၃၀၀ ကျော်ရှိအကြောင်းအတည်ပြု
(၁၉) ရက်‌နေ့ ၊ တိုကျိုကူးစက်မှုအသစ် ၅၃၄ ဦးရှိ … ကျန်ဒေသများတွင်…..
ယမန်နေ့ကဲ့သို့ပဲ (25) ရက်နေ့၊ တိုကျိုကူးစက်လူနာအသစ် 195 ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ !!
ကိုလိုနီလက်ထဲကနေ ဂျပန်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့သော သူလျှိုမိန်းကလေးတစ်ဦး
(၆) ရက်နေ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၆၀၀၁ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၆၅ ဦးရှိ !!!